धनकुटाको भेडेटार आन्तरिक पर्यटकहरुको यात्रा सूचीमा - NepalTourNews
NepalTourNews > समाचार > घुमफिर / पर्यटकीय आकर्षण > धनकुटाको भेडेटार आन्तरिक पर्यटकहरुको यात्रा सूचीमा
धरान – प्रदेश १ को प्रमुख पर्यटकीय आकर्षण धनकुटाको भेडेटार आन्तरिक पर्यटकहरुको यात्रा सूचीमा पर्ने गरेको छ /
धरानबाट १६ कि.मी. उत्तरमा समुद्रसतहवाट १४२० मिटर उचाईमा पहाडको टुप्पोमा अवस्थित सानो सुन्दर भेडेटार बजार धनकुटा जिल्लाको दक्षिणी प्रवेशद्वार पनि हो । यहाँबाट धनकुटा सदरमुकाम ३६ कि.मी. दूरीमा रहेको छ ।
उच्च पहाडमा रहेको वाह्रैमास चिसो हावा बहने हुनाले यहाँ गर्मी मौसममा शीतल हावा खान र जाडो मौसममा पिकनिकको लागि आउने मानिसहरुको भीड लाग्दछ । यहाँको चिसो हावापानी र मनोरम प्राकृतिक दृश्यावलोकनकालागि तरार्ई क्षेत्र र भारतका गर्मी ठाँउहरुबाट पनि पर्यटक आउने गर्दछन् ।
भेडेटारको शिरमा शैलुङ्गडाँडा नामक एउटा अग्लो चुचुरो छ । जिल्ला समन्वय समिति (धनकुटा) अनुसार , २०३८ सालमा वेलायतका युवराज चार्ल्स शैलुङ्गडाँडाको टुप्पोमा चढेको कारण यस डाँडालाई चार्ल्सप्वाइन्ट नामकरण गरिएको हो ।
भेडेटारबाट धरानबजार, तरार्ईका रमाइला फाटहरु, सप्तकोशी नदी, र कुम्भकर्ण , मकालु, कञ्चनजंघा लगायत सुन्दर हिमश्रृंखलाहरु र पहाडी श्रृखलाहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । भेडेटारबाट नजीकै उत्तरपट्टी राजमार्गको “नमस्ते मोड” छेउमा रमणीय नमस्ते झर्ना बगेको र भेडेटारबाट केही पश्चिममा ऐतिहासिक साँगुरीगढी (साँगुरी भञ्ज्याङ) रहेको छ ।
यातायात, संचार र होटल, रेस्टुरेन्ट आदिको राम्रो सुविधा भएको भेडेटार पर्यटकीय महत्वको स्थानको रुपमा अझ विकसित हुँदै जाने सम्भावना रहेको जिससले जनाएको छ /
तस्विर : ज्ञान /